Healthy Care Lanolin Cream - (၃)မျိုး
အသားရေရင့်သူတွက် စိုပြေနူးညံ့မှုနှင့် အာဟာရကိုပေးပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံထုတ် Lanolin creamလိမ်းအရေပြားသည် ကြည့်သူတိုင်းကို စွဲလမ်းစေနိုင်သည်။
၁။ Grape seed - အသားရေရင့်သူတွက် သြစသြေးလျနိုင်ငံထုတ် သဘာ၀ Lanolin ဟာ စပျစ်စေ့ဆီမှထုတ်ပြီး အသားရေအာဟာရကိုပေးသည်။ အရေးအကြောင်းများကိုလျှော့ချပေးသည်။ အသားအရေညီညာပြီး တင်းရင်းစေသည်။ ရေဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးကာ အသားအရေနူးညံ့ချောမွေ့စေသည်။
၂။ Evening Primrose oil - ၎င်းမှာ ပြင်းထန်တဲ့ GLA ပါဝင်ပါတယ်။ GLA သည် omega-6 fatty acid essential ဖြစ်ပြီး သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်းများအတွက် မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုဖြစ်ကာ အရေပြား လှုပ်ရှားမှု(ကျုံ့နိုင်မှု) ကို တိုးပွားစေသည်။ ထို့အပြင် အရေပြားပေါ်ကိုဘဲ အားပေးတာမဟုတ်ဘဲ အတွင်းပိုင်းကျန်းမာရေးကိုပါ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ Skin level ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး စိုပြေနူးညံ့စေလို့ အရေပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် စိတ်ချရပါတယ်။
၃။ Vitamin E Cream - Lanolin cream သည် vitamin E နှှင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး အရေပြားတောက်ပစေကာ ဖြူစင် ဝင်းပစေပါသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာနှင့် လည်ပြင်းအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ ၎င်းသည် စိုပြေမှုနှင့် အာဟာရကို ပေးပြီး အသားအရေပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Purified Water, Caprylic/Capric Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Sorbitan Stearate, Glyceryl Stearate, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Lanolin Oil, Hydrogenated Polyisobutene, Polysorbate 60, PEG-100 Stearate, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Fragrance, Sodium Phytate.
Purified Water, Caprylic/Capric Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Sorbitan Stearate, Glyceryl Stearate, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Glyceryl Caprylate, Lanolin Oil, Hydrogenated Polyisobutene, Polysorbate 60, PEG-100 Stearate, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Fragrance, Sodium Phytate.
Purified Water, Caprylic/Capric Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Sorbitan Stearate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Glyceryl Caprylate, Lanolin Oil, Hydrogenated Polyisobutene, Polysorbate 60, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Triethanolamine, Gluconolactone, Sodium, Benzoate, Fragrance.
Store below 30 degree C inadry place away from heat and direct sunlight. Protect from humidity.
Visitors : 342491